Ahoana ny fomba hampitomboana ny fanananao sy hampitomboana ny harenao - Victor Mochere
Hitanao ny fiara mandehandeha ary fantatrao fa tsy hanana ny iray amin'ireo ianao, na mety ho azonao tsara izany. Na mety te-hanararaotra ny fifanarahana sasany ianao saingy tsy mamela ny fividianana toy izany ny teti-bolanao. Tsy mora ny mitady vola fanampiny ho an'ny zavatra rehetra tadiavinao sy ilainao, saingy misy fomba kely maro hitazomana vola bebe kokoa ao am-paosinao. Na ohatrinona ny vola azonao dia azo atao ny mampihena ny fandaniana sasany ary mampitombo ny fananana.
Ny fitoniana ara-bola ananan'ny olona iray dia asehon'ny sandany. Ny vola, izay tombanana ho azon'ny olona iray amin'ny ho avy aorian'ny fivarotana ny fananana sy ny trosa rehetra, dia manampy amin'ny fananganana ity derivative ity. Azo kajy izany amin'ny fanesorana ny totalin'ny trosa amin'ny fitambaran'ny fananana. Ny fahazoana fidiram-bola ambony dia mampitombo ny sandan'ny olona iray, saingy misy fomba hafa koa.
Ireto misy fomba vitsivitsy hanombohana ny drafitrao.
1. Mividiana fiantohana aina
2. Hetezo ny fandaniana
3. Mampiasa vola amin'ny tahirim-bola sy ETFs
4. Aloavy ny trosanao
5. Manangana vola fanampiana vonjy maika
Mba hampitomboana ny hasarobidinao dia mila mampiasa vola amin'ny fananana izay mahazo lanja mandritra ny fotoana maharitra ianao. Tafiditra ao anatin'izany ny fananan-tany toy ny kaonty tahiry sy fisotroan-dronono ary fananana azo tsapain-tanana toy ny fananan-tany. Fananana ve ny fiantohana aina? Na fananana izany dia miankina amin'ny hoe mahazo tombony ara-bola amin'ny politika fiantohana aina ianao raha mbola velona. Noho izany, mazava ho azy fa tsy fananana ny fiantohana amin'ny fiainana satria ny olona miankina aminao ihany no mandoa vola rehefa maty ianao.
Fa ny fiantohana aina miaraka amin'ny sandan'ny vola toy ny fiantohana ny fiainana manontolo dia heverina ho fananana. Azonao atao ny maka vola amin'ny politikan'ny fiantohana ny fiainanao raha mbola velona ianao. Miaraka amin'ity karazana fiantohana aina ity, ny isan-jaton'ny vola aloanao dia miditra amin'ny kaonty fitahirizana vola. Ny vola dia miankina amin'ny politikanao. Satria mitombo ny sandan'ny politika fiantohana aina amin'ny fotoana, dia manome fandrakofana mandritra ny androm-piainany.
Noho izany, azonao atao ny mivarotra azy ho toy ny famahana ny fiainana rehefa tsy ilaina intsony ny politika. Ny fiantohana ny fiainana manontolo dia tsy isalasalana fa afaka manolotra dividends tsy misy hetra rehefa voarafitra araka ny tokony ho izy. Midika izany, ity politikan'ny fiantohana aina ity dia afaka manome loharanom-bola fanampiny raha ilaina, mety mihoatra noho ny vola azon'ny mpiasan'ny fiantohana. Miaraka amin'ireo zavatra ireo ao an-tsaina, dia mahazo fiantohana dieny izao.
Ataovy ao an-tsaina fa ny kely kokoa ny vola laninao, ny bebe kokoa ny vola azonao amboarina amin'ny harato. Izany hoe, ataovy azo antoka fa hanao famerenana ny tetibola. Jereo ny fandanianao ary fantaro hoe aiza no azonao ahena. Marihina fa na ny dolara etsy sy eroa aza dia afaka manangona vola be ao anatin’ny herintaona. Noho izany, diniho ny fandaniana azonao ahena sy ny vidiny tsy ilainao.
Ny tahirim-bola sy ny fifanakalozana fifanakalozana dia ahitana fitambarana fananana mitovy toy ny entana, fatorana ary tahiry. Ny ETFs dia azo amidy na vidiana amin'ny alàlan'ny fifanakalozana. Etsy andaniny, azo vidiana mivantana amin’ny orinasa mitantana ny vola ny vola iombonana. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hananganana harena maharitra dia ny fampiharihariana ny tenanao amin'ny tsenam-bola amin'ny alàlan'ny tahirim-bola sy ETFs. Rehefa manapa-kevitra ny hampiasa vola amin'ireo fananana ireo ianao dia zava-dehibe ny fanoloran-tena amin'izy ireo.
Mahaiza mahazo aina amin'ny fiovaovan'ny tsena. Tena ilaina ny mijanona amin'ny lalana ary mamela ny volanao hitambatra. Raha vantany vao mahazo aina amin'ny portfolio-nao ianao dia afaka manomboka maka paikady kendrena bebe kokoa amin'ny fiakaran'ny tsena amin'ny fotoana. Tsarovy fa tsy mety amin'ny rehetra ireo safidy fampiasam-bola ireo. Mitaky haavon'ny mpianatra sy faharesen-dahatra izy ireo mba hijanonana amin'ny tsena.
Raha vao azonao atao dia ataovy izay handoavana ny trosanao rehetra. Mariho fa ny vola trosanao dia azo ampiasaina hanamboarana ny harenanao. Na izany aza, fantaro ny sazy ampiharina amin'ny fandoavam-bola mialoha mba hisorohana izany. Diniho ny fanarahana ny fomba snowball hamerenana ny trosanao. Amin'ity fomba ity, mandoa vola kely indrindra isam-bolana amin'ny trosanao rehetra ianao fa mametraka vola fanampiny amin'ny fampindramam-bola ambany indrindra. Ny fanaovana izany dia hanafaka haingana ny vola azonao ampiasaina handoavana ny trosanao na hampiasanao vola.
Manokàna vola handoavana ny fandaniana maika toy ny fanamboarana fiara na olana ara-pahasalamana tampoka. Ny fananganana tahirim-bola vonjy maika dia fomba iray azo antoka hampitomboana ny harenao sy hampitombo ny fanananao. Afaka manampy anao hisoroka ny fampindramam-bola bebe kokoa izany ary hijanona ho tafavoaka ara-bola. Afaka manomboka kely ianao ary rehefa afaka mitahiry bebe kokoa ianao dia afaka manandrana manangona bebe kokoa ho an'ny tahirim-bola maika.
Aza hadino ny miresaka amin'ny mpanolotsaina ara-bola na kaonty iray mba hahafantaranao ny fomba hanatsaranao ny toe-bola. Aza menatra ny mampiasa ny loharano misy na mangataka fanampiana. Ataovy azo antoka koa ny hamorona drafitra ara-bola harahinao. Rehefa manana tanjona ara-bola tianao hotratrarina na tratrarina ianao, dia ho voatosika kokoa hametaka azy ireo sy hampihatra azy ireo. Araho ny fandrosoanao ary fantaro izay ilainao hatsaraina mba hahazoana antoka fa hahatratra ireo tanjona ireo ianao.